एलिजाको लुगा खुस्केपछि……. – List Khabar
Home / मनोरंजन / एलिजाको लुगा खुस्केपछि…….
एलिजाको लुगा खुस्केपछि…….
admin3weeks ago मनोरंजन Leaveacomment 56 Views
एलिजाका अनुसार, देशका विभिन्न जिल्लामा रहेका अती वि कट गाउँमा पुगेर घर बनाउने अभियान चैत्र ११ गतेबाट सुरु हुनेछ । नेपाली चलचित्र ‘अनुराग’मा काम गरेर कला क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी एलिजा अहिले म्यूजिक भिडियोमा व्यस्त छिन् । एलिजाले यो अभियानमा आफूलाई विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरुले पनि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको बताइन् । एलिजा भन्छिन्, ‘मैले विभिन्न समयमा विभिन्न कुराबाट प्रभावित मानिसहरुलाई सहयोग त गर्दै आएकी थिएँ ।
Previous सुरु हुँदै बिध्यालय भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन संचालन
Next किन आउँछ ओठ र जिब्रोमा घाउहरु ? यी समस्या हटाउने घरेलु उपचार